Mpanamboatra tavoahangy tavoahangy boribory mpamokatra sy mpamatsy | Copak
Kazo fisotro mangatsiaka PET
Kira gilasy PET
Kira fanandramana PET
Kaontenera Sakafo PET
Tompondakan'ny PET Portion
Vokatra Eco Friendly
Tavoahangy PLA Any Sina
Pet Soda Cans
Tavoahangy PET Square
Orinasa tavoahangy plastika
Mpanamboatra tavoahangy PET any Sina
Tavoahangy vita amin'ny plastika
Ny tavoahangy PET Square dia safidy malaza amin'ny indostrian'ny zava-pisotro. Ireto tavoahangy ireto dia tsara ho an'ny ranom-pisaka mangatsiaka, zava-pisotro mangatsiatsiaka, dite mangatsiaka, ronono, rano, ary marinade.
Ny tavoahangy PET Square dia mora ny mameno zava-pisotro tsy misy gazy ary manome fahitana avo lenta.
Mombamomba ny vokatra:
Tavoahangy PET Square dia safidy malaza amin'ny indostrian'ny zava-pisotro. Ireto tavoahangy ireto dia tsara ho an'ny ranom-pisaka mangatsiaka, zava-pisotro mangatsiatsiaka, dite mangatsiaka, ronono, rano, ary marinade.
Tavoahangy PET Square dia mora ny mameno zava-pisotro tsy misy gazy ary manome fahitana avo lenta.
Tavoahangy PET Square maivana ary tsy maka toerana firy noho ny tavoahangy boribory eo amin'ny talantalana. Ireto tavoahangy ireto dia maimaim-poana BPA, nankatoavin'ny FDA, ary natao tamim-pireharehana tany Chine
Mazava PET Kianja tavoahangy manome fijery akaiky fitaratra izay mampiseho ny vokatra ao anaty mazava kristaly. Ny plastika PET ihany koa dia azo ahodina 100%!
COPAK dia manana karazana tavoahangy PET toradroa amin'ny fomba isan-karazany. Ireto tavoahangy plastika mazava ireto dia fomba iray fitehirizana sy famoahana vokatra marobe, ary misy amin'ny habe maro mifanaraka amin'ny filàna rehetra. Ny tavoahangy tavoahanginay dia misy safidy fikatonam-bidy isan-karazany manomboka amin'ny kapila vita amin'ny aliminioma ka hatramin'ny satroka mahazaka zaza.
Samy manana tavoahangy PET malalaka vava sy vava kely malalaka izahay. Azonao atao ny manamarina antsipiriany bebe kokoa toy izao,
fahafahana Top Dia halavan'ny sakany Hight Fonosana (baoritra)
600ml 54mm 55mm 55mm 195mm 200 pcs
500ml 53mm 60mm 60mm 175mm 200 pcs
400ml 38mm 54mm 54mm 164mm 200 pcs
350ml 38mm 58mm 58mm 128mm 200 pcs
Tavoahangy PET Square Square an'ny COPAK:
Fitaovana PET: azo averina averina 100%
Fisehoana ivelany: asehoy amin'ny fomba fijery mahafinaritra ny zava-pisotro misy anao, ary mahasarika mpanjifa izany.
Maimaimpoana ny BPA
Kilasy fisakafoanana: Ny tavoahangy rehetra dia novokarina niaraka tamin'ny fenitry ny sakafo ary mampanantena fa madio sy azo antoka ho an'ny fitoeran'ny zava-pisotro.
Ny habe sy ny endrika carious: manana isan-karazany isika tavoahangy PET toradroa. Ary afaka misafidy izay tianao amin'ny orinasa izahay.
Ny tavoahangy sy satroka amidy misaraka
Copak's Tavoahangy toradroa PET dia atolotra miaraka amina tampoka plastika na kapila aluminium. Na afaka mandefa ny takelaka takiana aminao koa izahay, hanome loharano ho anao izahay.
Teo aloha: Tavoahangy misy tavoahangy
Manaraka: tavoahangy PET ambongadiny
Tavoahangy plastika PET 8oz
Tavoahangy fisotroana PET
Tavoahangy fisotroana PET any Shina
Tavoahangy vita amin'ny tavoahangy PET
Tavoahangy ranom-boankazo PET
Tavoahangy plastika PET
Tavoahangy plastika PET miaraka amin'ny satrony
Kaontenera zava-pisotro PET
tavoahangy malefaka PET
Tavoahangy PET 500cc
Tavoahangy PET amin'ny alim-bidy aluminium
Misoratra anarana amin'ny Gazetinay
ao amin'ny media sosialinay
Rihana faha-2, tranoben'ny No 11, làlana 988 Zhongchun, distrikan'i Minhang, Shanghai, Sina.
Shanghai Copak Industry Co., Ltd. Sourcin ...
Kaopy sy tavoahangy plastika PET
Fandraisana vahiny iraisam-pirenena Shanghai faha-30 Shanghai ...